Waa Maxay Sababta Ay Maxamed Saalax Iyo Sadio Mane Looga Xidhay Albaabada Kooxaha Barcelona Iyo Real Madrid? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Liverpool maaha inay u wewerto labadeeda laacib ee Sadio Mane iyo Mohamed Salah, sababtoo ah, labada kooxood ee ugu waaweyn ee lala xidhiidhinayey hadda diyaar uma inay iibsadaan, sida uu rumaysan yahay halyeygii hore ee Liverpool ee Stev McManaman.
Labadan laacib oo xili ciyaareedkan bandhig fiican sameeyey waxa qayb libaax kasoo qaateen guulihii xidhiidhka ahaa ee ay kooxdoodu ugu dhowaatay inay soo qabato rikoodhkii guul-darro la’aanta abid ugu dheeraa ee Arsenal, waxaana ay guulo iyo barbar dhac soo galayeen 44 ciyaarood oo xidhiidh oo horyaalka Premier League ah. Salah waxa uu soo dhaliyey 16 gool, waxaanu caawiyey lix kale oo ay asxaabtiisu dhaliyeen. Mane ayaa isaguna dhaliyey 14 gool iyo toddoba gool oo caawin ah.
Xiddiga reer Senegal ee Mane waxa lala xidhiidhiyey Real Madrid ka hor intii aanu soo bixin xanuunka Coronavirus ee hakadka geliyey ciyaaraha horyaallada, taas oo la sheegay inuu bartilmaameedka koowaad u noqon doono marka uu suuqa iibku furmo, hase yeeshee sida uu sheegay halyeygii hore ee Liverpool iyo Real Madrid ee McManaman, kooxda reer Spain diyaar uma inay xagaagan iibsato Mane.
Waraysi uu siiyey HorseRacing.net waxa uu McManaman ku sheegay in Real Madrid ay hore u iibsatay laacibka reer Belgium ee Eden Hazard, qorshaheeda suuqana isbeddel ku samaysay oo ay ciyaartooyo da’yar oo ay mustaqbalka ugu talo-gashay maalgashatay, sida Rodrygo iyo Renier oo ay ka keentay Brazil, taasina ka xidhayso Mane albaabka Santiago Bernabeu.
“Real Madrid waxay mar horeba qaadatay Eden Hazard, waxay iibsatay Rodrygo xagaagii hore iyo maalgelin ay ku sameeyeen Reinier bishii January, sidaa daraadeed, wararka ku-tidhi-kuteenka ah, waa cusbo bad lagu shubay oo kale.” Ayuu yidhi McManaman.
“Ka sokow sida uu Champions League ku dhamaado xili ciyaareedkan, kooxaha waaweyn ee adduunku waqtigan waa Ingiriis. Real Madrid iyo Barcelona maaha kooxaha waaweyn. Labaduba dib ayay abaabul u bilaabeen, waxaanay keensanayaan ciyaartooyo cusub oo yar, sababtoo ah xili ciyaareedyo niyad-jab ah ayaa soo maray sannadkan, markaa waxay doonayaan inay bilaabaan in ay dib usoo celiyaan kooxahooda. Markaa ilama aha in wax fursad ah uu midkoodna Sadio Mane ama Mohamed Salah u haysto inuu ku tago Real Madrid iyo Barcelona.”
Sadio Mane waxa uu Liverpool joogay tan iyo sannadkii 2009, iyadoo kasoo qaadatay Southampton, halka uu Salah sannad kaddib uga soo wareegay kooxda Talyaaniga ah ee Roma, waxaanay xili ciyaareedkii hore ka caawiyeen inay ku guuleysato Champions League, xili ciyaareedkana waxay lix dhibcood oo kaliya uga hadhsan yihiin horyaalka Premier League oo markii ugu horreysay muddo soddon sannadood ah ay Liverpool ku guuleysan doonto.